Pro Traktor u Mac Review | MacArsenal
> Resource > Mac > Native -jeega: Traktor Pro for Mac
Pro Traktor waa software DJ digital oo bixiya qodan iyo saameynta kala duwan. Oo waxaad iyaga u dhigma kartaa adigoo. Pro Traktor gelineya inaad u hagaagsan ee waxqabadka, taas oo macnaheedu yahay in aad diiradda kara adiga oo ku fiican. Waa arrin aad u sahlan in ay isticmaalaan ay interface dareen noqon kartaa hanuunka aad u.
Pro Traktor bixisaa si fudud u maaraysay dadka isticmaala. Xitaa haddii aadan waa xirfadle, Pro Traktor sidoo kale waa u fududahay in la isticmaalo.
Nidaameed ee waxqabadka
Pro Traktor uu leeyahay shaqo ee syncing. Waxaa DJ awood u fiican si ay u qabtaan. By isticmaalaya "nidaameed Lock" function, laxanka ciyaarta iyo waxqabadka ciyaarta si fiican.
Gacanta ku fiican oo qaab
Pro Traktor siisaa tiro badan oo saamayn iyo is-dhexgalka dirato ka dhigaysa kuwa saamaynta ku dhammaataan isku aadiyo. Waxaa loola jeedaa dadka isticmaala iyaga aad ugu dhigma karaa siyaabo iyaga u gaar ah si ay u xakameeyaan waxqabadkooda.
Pro Traktor waa app ah u X. Mac OS Waxa aad bixisaa maxkamad 30-maalin ah. Haddii aad rabto in aad sii isticmaali, waxaad u baahan tahay in ay bixiyaan $ 229 oo doolar si ay u iibsadaan liisanka. In kastoo kharashka waa wax yar ka sareeya, mid istaahila.
Shaqooyinka Traktor Pro leeyihiin waa weyn. Waa dareen leh si loogu isticmaalo. Waxa si fudud ku rakibtay. A interface laba-sharraxaa ku siinayaa ilo kala duwan muusikada ciyaaro. Pro Traktor uu leeyahay waxyaalo badan oo waaweyn. Tusaale ahaan, Traktor Pro hagaagsan kartaa Isbadalo iyo kartida. Iyadoo habkaani, waxaad noqon kartaa nasasho dheeraad marka aad shaqo sameeyo. Saamaynta codka fiican ayaa sidoo kale feature weyn. Oo aad qasan kartaa kala duwan ee saamaynta codka si aad u hesho waxa aad doonayso, iyaga gaarsiinta dadka kale. Markaasuu qof kasta oo ku raaxaysan karaan qaab aad. Iyada oo la sii daayo cusub, muuqaalada dheeraad ah lagu daray. Dheeraad ah ka aad ka heli kartaa. Pro Traktor waa software weyn aad u.